Ndingasusa njani ibala kwisofa yam yesikhumba? - Ukucoca
Ndingasusa njani ibala kwisofa yam yesikhumba?
Buza iingcali: Iphaneli yethu yeengcali iphendula imibuzo nge-DIY, uyilo lwe-eco, i-mortg, ukucoca, uyilo, imicimbi yabathengi kunye nokunye.
Umbuzo: 'Kwiveki ephelileyo isofa yam yesikhumba iye yawa lixhoba lamabala ancangathi ashiywe ngumzukulwana wam. Ndafaka isicelo sokucoca ulusu, kodwa ngoku ndishiyeke ndinesibhanxa esonakeleyo. Yintoni ebendifanele ukuba ndiyenzile kwaye ndinokuwulungisa umonakalo?
Uqoqosho lwasekhaya kunye nelungu langaphambili leZiko lokuGcina iiNdlu eziLungileyo, uHelen Harrison, uthi: Kuvakala ngokungathi usikhuhluzile isofa kancinci ngehlombe. Omnye wemithetho yegolide yayo nayiphi na inkqubo yokususa ibala kukuba mnene kakhulu, ngakumbi ngezinto ezibuthathaka njengesikhumba. Kungcono uku-dab kunokuba uthambise, kwaye usebenze ngaphandle kwebala ngaphakathi ukunqanda ukusasaza ngakumbi.
I-WD-40 ilungile ekunyibilikiseni nasekususeni amanqaku ancangathi, kodwa ngokuxhomekeke kumgangatho wokugqitywa kwisofa yakho, inokuyinyibilikisa i-wax kunye nedayi ekhokelela kumonakalo ongaphezulu.
Vavanya indawo engaziwayo ngaphambi kokuba uqhubeke. Tshiza inani elincinci le-WD-40 kwitawuli yasekhitshini kwaye ngobunono usebenzise ibala, usiya kwiindawo ezahlukeneyo zetawuli njengoko ibala liphakanyisiwe. Ukususa nayiphi na intsalela ye-WD-40, cima indawo echaphazelekayo ngetawuli yasekhitshini efakwe kwisisombululo esingenamanzi sokuhlamba, kwaye ugqibe ngokucima kwakhona ngamanzi acocekileyo kwaye wome ngelaphu elithambileyo.
Ukujongana neempuku ezibukhali kunzima kwaye, ngaphandle kokwazi ukuba yeyiphi na ifele yakho eyenziwe kuyo, andinakukunika ngcebiso eneenkcukacha. Thumela imifanekiso yomonakalo kuAnita kwiKlinikhi yeeFenitshala (0844 879 3691; ifenitshala.co.uk Kwaye uya kuba nakho ukukucebisa ngezona mveliso zibalaseleyo kunye neendlela oza kuzisebenzisa.
Isuka: Iphephancwadi i-House Beautiful
Ukucoca indlu yamandla amabi
jimmy fallon house ukhenketho
imibono epholileyo yegumbi labantwana
imiyalezo emnandi valentines ngosuku
uyilo lwasimahla lwe-Intanethi